dimanche, 09 mai 2021 12:54
Nitsidika ny Distrikan’i Nosy Be, Faritra DIANA, ny delegasionim-panjakana notarihin’ny Praiminisitra sady Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, ny sabotsy 8 may 2021, nanatanteraka fivoriana arak’asa nandaminana ny fampihodinana ny fiainam-bahoaka ankapobeny sy ny fandriampahalemana. Tao anatin’izany ny fizaràna fanampiana avy amin’ny fitondrana, ho an’ireo tena marefo ary nijery ifotony ny fandrosoan’ny asa fanamboarana fotodrafitrasa ho amin’ny fampandrosoana. Ny fizahantany no seha-pihariana voalohany ao an-toerana, amin’ny lafiny toe-karena. Nisy fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana nampiato ny sidina avy any ivelany ary nanakatona ny Distrikan’i Nosy Be. Fantatra anefa ny fiantraikan’izany teo amin’ny fiainam-bahoaka, hoy ny Praiminisitra, ka noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny fanapahan-kevitra hanampian’ny fitondram-panjakana ny vahoaka marefo, amin’ny alalan’ny tetikasa FID, vola 50.000 Ariary isam-bolana.
samedi, 08 mai 2021 12:31
Etazonia dia miarahaba an’i Madagasikara noho ny fahatongavan’ny Vaksiny COVID-19 amin’ny alalan’ny COVAX Etazonia dia miarahaba an’i Madagasikara noho ny fahatongavan’ny vaksiny Covishield COVID-19 miisa 250 000 ny faha-8 ny volana May. Tamin’ny alalan’ny COVAX izay fiaraha-miasa iraisam-pirenena hiantohana ny fitsinjarana ara-drariny ny vaksiny fiarovana amin’ny COVID-19 no nahazoana ireo vaksiny ireo. Vao haingana i Etazonia no nanome famatsiam-bola mitentina 2 000 tapitrisa dolara izay ampahany amin’ny famatsiam-bola 4 000 tapitrisa nampanantenainy homena ny vovonana ho an’ny vaksiny GAVI ho fanohanana ny hetsika COVAX, ary Etazonia no firenena lohalaharana amin’ny fanohanana ny hetsika fahazoana vaksiny hiadiana amin’ny COVID-19 maneran-tany. "Te hiarahaba ny governemanta malagasy aho noho ny fandraisany andraikitra nandray anjara tamin’ny COVAX ary nanafarana ireo vaksiny ireo izay tena ilain’ny vahoaka malagasy," araka ny nambaran’ny Ambasadaoro Amerikana Michael Peletier. "Rehareha ho an’i Etazonia ny maha-lohalaharana azy amin’ny fanohanana ny COVAX, izay miantoka ny fitsinjarana ara-drariny vaksiny azo antoka sy mahomby eto Madagasikara sy maneran-tany."
mercredi, 05 mai 2021 18:39
Miaka-bokatra ny aty Alaotra. Tonga ny fotoana fijinjam-bary. Isan-taona amin’ny vanimpotoana toy izao, dia maka na manafatra mpijinja vary avy any Vakinankaratra ny tantsaha aty Alaotra. Tsy izay no hiseho amin’ity, namoaka fanambarana ny Faritra Alaotra Mangoro fa mihidy ny faritra Vakinankaratra ankehitriny noho ny fitomboan’ny tranga valanaretina Covid-19 ka tsy afaka manafatra mpandidy vary avy any, na teo aza ny fandaminana sy fifanarahana efa natao. Manoloana izany dia misy ny dingana atao amin'ny fanafarana mpandidy avy any amin'ny Distrikan'i Moramanga, Andilamena, Ambatondrazaka, izay samy ato anatin'ny Faritra Alaotra Mangoro.
mercredi, 05 mai 2021 07:57
Antsirabe : Nahazo fampitaovana iadiana amin’ny Covid-19 ny Clinique Ave Maria
Nanolotra fitaovana ho an'ny Clinique Ave Maria ny Filoham-pirenena nandritra ny diany tao Antsirabe ny talata 4 aprily 2021. Ity toeram-pitsaboana ity dia afaka mandray marary 120, ary tantan-dry masera “Franciscaines missionnaires de Marie” izay mandray an-tanana ireo mararin'ny Covid-19 ao Antsirabe. Anisan'ny fitaovana natolotry ny Filoha ho azy ireo ny fanafody isan-karazany sy fitaovam-pitsaboana ary ny “concentrateurs d'oxygène” miisa 10. Nahazo ny Tohan’aina ihany koa ireo marary. Nankasitraka ireo masera ao amin'ny klinika Ave Maria ny Filoham-pirenena noho ny fifanomezan-tanana sy firaisankina nasehon'izy ireo manoloana ny ady amin'ity valanaretina ity. Hisitraka tambinkarama manokana tahaka ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra mandray an-tanana ny fitsaboana ny Covid-19 ihany koa ireo mpitsabo sy mpiasa rehetra ao amin’ity klinika ity.
Comme prévu, 2000 bouteilles d’oxygène sont arrivées à l’Aéroport d’Ivato ce lundi 03 mai 2021. Le Président de la République Andry Rajoelina a assisté à la cérémonie de réception officielle de ces nouveaux matériels. Une initiative visant à renforcer les équipements médicaux mis à la disposition des hôpitaux et des centres de traitement de la Covid-19. « Nous devons mettre tout en œuvre pour lutter efficacement contre cette pandémie et sauver la vie de nos compatriotes », a déclaré le Chef de l’État lors de cette occasion. A l’instar des concentrateurs d’oxygène, ces bouteilles d’oxygène seront aussi acheminées immédiatement vers les régions les plus touchées par la pandémie, en l'occurrence dans les régions Vakinankaratra, Haute Matsiatra, Anôsy et SAVA.
Na ho an'ny marary, na ho an'ny orinasa mampiasa ireo mpiasa ahiana voan'ny aretina Covid-19, dia mametraka olana ny fahelan'ny valin'ny fitiliana, ankoatran'ny vola izay mivoaka ao anatin'izany. Ireo mpandeha mivoaka any ivelany, na ireo manainga amin'ny fiara-manidina anatiny na ivelany, dia takiana ny 72ora valin'ny fitiliana izay andovanm-bola hatrany amin'ny 100 000ar, ary averina indray izany fiiliana izany, ary miverina mandoa vola raha nofoanana na nahemotra ny sidina. Ny an'ireo ananana ahiahy fa marary, na ireo olona manodidina azy, na ireo cas contact kosa, dia mampitebiteby ny saina ny fiandrasana ny valin'ny fitiliana izay maharitra hatrany amin'ny 2 herinandro be izao, misy aza moa no tsy mahazo hafatra miafina amin'ny sms akory. Velom-panontaniana izany ireo mpampiasa, satria ilay mpiasa ahiana ho marary tsy azo ampidirina miasa, ireo manodidina azy koa ahiana hitondra aretina aty am-piasana, ny karaman'ny mpiasa anefa tsy maintsy aloa. Maro ireo tsy manana congé intsony, dia atao ahoana, na ny asa tsy mandeha, ny valin'ny fitiliana efa ho iray volana tsy mipoitra, ny aretina efa mihombo raha sanatria ka tena marary marina. Tsy lazaina intsony ny hoe, betsaka koa no faux négatif, na ireo voalaza fa tsy mitondra valaneritna, natao matetika ny fitiliana, nefa dia marary…
vendredi, 02 avril 2021 14:21
Fahasalamam-bahoaka : Nanamafy ny fanjakana fa voarara ny fanaovana dokambarotra sy fivarotana fanafody tsy nahazoana alalana
"Fanafody azo antoka no atolotra ny vahoaka fa sarobidy ny aina", koa raràna arak'izany ny fanaovana dokambarotra amin’ny endriny rehetra sy fivarotana fanafody tsy nahazoana alalana avy amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Manamafy izany ny naoty laharana 140/MSAN/Ministre, tamin'ny 10 Aprily 2019, izay mandrara ny fanaovana dokambarotra mikasika ny fitsaboana, araka ny fanamafisana nataon’ny avy amin’ny Fitaleavana misahana ny Farmasia, laboratoara, ary ny fitsaboana nentim-paharazana ("Direction des Pharmacie, des Laboratoires et Médecines Traditionnels" DPLMT ) eo anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.
mardi, 30 mars 2021 08:45
African Academy of Sciences : Miisa dimy ny Malagasy mpikambana
Niampy telo ny Malagasy mpikambana ao amin’ny African Academy of Sciences (AAS), araka ny fampahafantarana nataon’ny profesora Ratsimbazafy Jonah. Tsy iza ireo mpikambana vaovao ireo fa ny “docteur” isany Miora Ramanakoto, Naina Rakotosamimanana ary Luciano Michel Tantely. Mbola tanora vao misandratra eo amin’ny asa fikarohana ara-tsiansa avokoa izy telo mianadahy ireo. Tonga dimy izany ankehitriny ny isan’ny Malagasy mpikambana ao amin’ity rafitra akademisiana manana ny famirapiratany manerana ny kaontinanta afrikana sy eran’izao tontolo izao ity. Ny Malagasy mpikambana roa hafa ao dia tsy iza fa ny manam-pahaizana fanta-daza manerantany Raoelina Andriambololona sy Ratsimbazafy Jonah.
jeudi, 25 mars 2021 17:33
Fimailo : Ny faritra atsinanana no anisan'ny mpanjifa be indrindra
Nanaitra ny teo anivon'ny sehatry ny fahasalamana ny fahitana ny fanjifana maro be ny fimailo na capote taty amin'ny faritra atsinanan'ny Nosy. Nidina taty an-toerana mihitsy ireo mpanara-maso eo anivon'ny fahasalamana. Ankoatran'ny fampiasana ny fimailo amin'ny firaisana ara-nofo, dia hita fa ampiasain'ny olona maro, indrindra ny any ambanivolo, hiarovana ny lampe de poche apetaka amin'ny loha ireny ilay fimailo mba tsy ahalena ny orana ilay jiro fanazavana amin'ny alina. Faritra manoran-dava moa ny aty atsinanana. Ao rahateo ny mampiasa ny menaka ao anatin'ilay fimailo atao amin'ny volo, raha ny voalazan'izy ireo dia mampaniry volo ilay menaka, mampalama ny filahiana ao anatiny iny. Fanaon'ny miaramila tany ivelany rehefa miady moa ny manarona ny vavabasy amin'ny fimailo tsy hidiran'ny rano ny basy.Misy ihany koa ny mampiasa azy ireny anaronana ny lohan'ny antenne parabolique hiarovana azy amin'ny ranon'orana, na dia efa natao ahazaka orana aza ireny fitaovana ireny.
samedi, 20 mars 2021 12:44
Vohitra Misandratra Ambolomanjakarivo : Nahazo ivo-toeram-panofanana
Notokanana tamin'ny fomba ofisialy, nandrita ny fankalazana ny Taom-baovao Malagasy ny 14 martsa ny ivo-toeram-panofanana arakasa "Soa Mahamanina" ao Vohitra Misandratra Ambolomanjakarivo, Distrikan'Itasy. Nilaza ramatoa Volanirina ANDRIAMANANORO, filohan'ny fikambanana DEFI, tompon'antoka amin'izao fampijoroana ny toeram-panofanana izao, fa zava-dehibe ho an'ny tanora ny fianarana asa, fambolena sy fiompiana, fianarana ny teknolojia, ny informatika, fianarana mahandro sakafo, fianarana zaitra sy asa-tanana, fianarana mandrafitra sy tao-trano, eny hatramin'ny fifehezana teny vahiny maromaro. Izany no antony nananganana izao ivotoeram-piofanana izao amin'ny maha Vohitra Misandratra ety Ambolomanjakarivo. Ka ahitana trano moderina, efitra malalaka sy toeram-piofanana manaraka ny fenitra takian'izany, ka azo hitarina arakaraky ny filan'ny faritra hoy ny Tale Jeneraly misahana ny Tetikasan'ny Filoham-pirenena, DGPP, Augustin Andriamananoro.